Fampirantiana : Haneho ny « Voie/x » etsy Analakely i Sandra Reinflet -
AccueilVaovao SamihafaFampirantiana : Haneho ny « Voie/x » etsy Analakely i Sandra Reinflet
06/03/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Mpaka sary sy mpamorona. Tafiditra amin’ny herinandron’ny teny frantsay sy ny frankôfônia fihaonana araka ny literatiora. Haneho amin’ny fampirantiana ny « Voie/x » etsy amin’ny Institut Français de Madagascar Analakely manomboka anio, ary aharitra hatramin’ny 31 marsa i Sandra Reinflet. Ity farany izao mpamorona tantara marina miainga amin’ny fihaonana sy ny sary alainy. Nandritra ny fotoana nijanonany teto Madagasikara, dia nisy ny fiarahana sy fihaonana tamin’ny mpanakanto Malagasy, ary miainga amin’izany io fampirantiana io.
Miainga amin’ny fahafahan’ny mpanakanto (mpanao hosodoko, mpitendry, mpandihy, poeta…) mivelona amin’ireo kanto ataony ny hevitr’i Sandra Reinflet amin’io tetikasa io. Asehony amin’izany ny sary sy ny mombamomba ireo mpanakanto maro efa nihaona taminy toa ny avy any Mauritanie, Nouvelle-Giunée, Iran ary teto Madagasikara. Nandritra ny fandalovany teto Madagasikara dia mpanakanto malagasy 10 no nihaona tamin’i Sandra Reinflet nahitana an-dry Julie Iarisoa, Christelle Ratri, Catmouse, Fela Razafiarison, Gad Bensalem, Faly Razafimahavaly RS, Rijasolo, Môssieur Njo, Rianando Ludovic Randriamanantsoa ary Temandrota. Mpanakanto izay samy manana ny talentany sy ny kanto voiziny miainga any amin’ny dihy ka hatramin’ny hairaha araka endrika amam-bika, mandalo ny mozika, teatra, tantara an-tsary…
Ankoatra ny maha-mpaka sary azy, dia mpanoratra manana ny talentany ihany koa i Sandra Reinflet. Hisy ihany koa ny fihaonana sy fampahafantarana ataony mikasika ny boky navoakany farany mitondra ny lohateny hoe « Ne parle pas aux inconnus », izay navoakan’ny edisiona JC Lattès tamin’ny 2017, izay ho entanin’i Kemba Ranavela anio amin’ny 4 ora tolakandro.